अमेजन अनुसन्धान अनुसन्धान उपकरणले तपाइँको उत्पादन सूची अनुकूलनलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ?
सबै वाणिज्य व्यापारीहरू जसले ईकमर्स व्यवसाय समाचारहरू निगरानी गर्दै जान्दछन् कि कसरी अमेजन अमेजन विश्वव्यापी व्यापारिक प्लेटफार्ममा तपाईंको उत्पादनहरू राख्न सक्दछन्।. अमेजनले बिक्रेता र खुद्रा विक्रेताहरूको लागि फाइदा प्रदान गर्दछ. यसैले यो तपाईंको अमेजनमा प्रस्तुत गर्न कहिल्यै ढिलो छैन कि तपाईसँग तपाइँको ब्रान्डेड वेबसाइट छ वा होइन.
अमेजनमा तपाईंको उत्पादनलाई दृश्यात्मक बनाउन खोज्नुको लागि तपाइँलाई जित्न सफल विपणन अभियान आवश्यक छ. यो ध्यान दिइन्छ कि अमेजन ए9श्रेणी एल्गोरिथ्म हामी Google मा हेर्न को लागी पुरा तरिकाले फरक छ. अमेजनले त्यस पछि राजस्व को अधिकतमकरण र रैंक उत्पादनहरु मा एक उच्चारण गर्दछ. यसको मतलब प्रत्येक अमेजन विक्रेताले यसको समग्र व्यापारिक राजस्व बढाउने मौका र ब्रान्डेड वेबसाइटको तुलनामा अझ बढि बढि आकर्षित गर्दछ. यद्यपि, यस्तो प्रतिस्पर्धी ई-वाणिज्य वातावरणमा, तपाईंको उत्पादनहरू राख्न र बिक्रीको लागि प्रतीक्षा गर्न पर्याप्त छैन, भित्री ब्रान्ड राम्रो तरिकाले पनि चिनिन्छ. त्यसैले, तपाईंको लक्षित दर्शकहरु द्वारा तपाईंको उत्पादनहरु लाई देख्न को लागी, तपाईंलाई आफ्नो समय र खोजशब्द अनुसन्धान मा प्रयास को निवेश को आवश्यकता छ, र सूची अनुकूलन को आवश्यकता. यसबाहेक, यो अमेजन मार्केट प्रोग्रामहरू (अमेजन विक्रेता केन्द्रीय, अमेजन बिक्रेता केन्द्रीय, अमेजन विक्रेता केन्द्रीय एक्सप्रेस) मध्ये एक प्रयोग गर्न योग्य छ जसले तपाईंको व्यापार आवश्यकतालाई पूरा गर्नेछ।.
एक अमेजन बिक्रेताको रूपमा, तपाईंसँग अनुसन्धान गर्नु, ट्र्याकिङ र व्यवस्थापन सेवा सहित धेरै काम गर्ने छ. यदि तपाइँसँग आफ्नो निपटानमा धेरै उत्पादनहरू छन् भने, तिनीहरू सबै म्यानुअल रूपमा व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ. तपाईंलाई सफलता प्राप्त गर्न मद्दतको लागि तपाईंलाई व्यावसायिक ट्र्याकिङ सफ्टवेयर चाहिन्छ.
यस आलेखमा, म तपाईंलाई केहि व्यावसायिक अनुसन्धान र विश्लेषणात्मक औजारहरूसँग परिचित गर्नेछु जसले तपाईंलाई अमेजनमा आफ्नो रैंकिंग बढाउन मद्दत गर्नेछ र थप सुप्रेरहरू आकर्षित गर्दछ।.
सबै अमेजन उपकरणहरु जो अमेज़न मा तपाईंको राजस्व को अधिकतम गर्न सक्छन्
) यदि तपाईं अमेजनमा कुन उत्पादन र आला श्रेणिहरु लोकप्रिय छन् भन्ने बारेमा सही जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, जंगल स्काउट तपाईंको लागि उत्तम हुनेछ।. यो अनुसन्धान उपकरणले तपाईलाई लाभान्वित गर्न सक्नुहुने अमेजन उत्पादनहरू खोज्न मद्दत गर्दछ. जंगल स्काउटले उद्योगमा सबैभन्दा विश्वसनीय अमेजन बिक्रीको डेटा संकलन गर्दछ जुन तपाईंलाई कुनै पनि महँगो व्यापार गल्तीहरूबाट बच्न मद्दत पुर्याउँछ. यो उपकरणमा एक उत्पाद ट्रयाकर पनि समावेश छ जुन तपाईंको समय बचत गर्न डिजाइन गरिएको छ तपाईंले थोरै अनुसन्धानमा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ. यसको अतिरिक्त, तपाईं आफ्नो आला प्रतियोगिहरु जासूस यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. र, अन्तमा, यो भन्दा राम्रो भाग हो कि लुकाइआ राजस्व स्ट्रिमहरू उल्टाउन आफ्नो आला स्वत: अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ. Chrome क्रोम एक्सटेन्सनको रूपमा जंगल स्कोउट प्रयोग गर्न भने, तपाइँ ब्राउज गर्नुहुने कुनै पनि पृष्ठमा तत्काल उत्पादन जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईं प्रत्येक उत्पादन को मूल्य, अनुमानित बिक्री, समीक्षा गणना र अधिक प्रदान को साथ प्रदान गरिनेछ. यसले तपाईंलाई उडानमा सही उत्पादन तुलना गर्न मद्दत गर्नेछ.
यसैले, जंगल स्काउट तपाईं प्रतिस्पर्धी अमेजन बजारको शीर्षमा र आफ्नो आला प्रतियोगिहरु बाहिर गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्छ।.
Semalt अमेजन एसईओ
धेरै विक्रेताहरु Google खोज को अमेजन को खोज उत्पादनहरू. सबैभन्दा पहिले, तिनीहरू उत्पादन नाम र अमेजनले Google खोजी बक्समा सम्मिलित गर्दछ, र त्यसपछि त्यसपछि अमेजन खोज परिणाम पृष्ठमा देखा पर्दछ. Semalt अमेजन एसईओ तपाईंको अमेजन उत्पाद प्रविष्टिको संभावना बढाउन कार्य गर्दछ Google SERP को शीर्षमा. ठूलो लिंक इमारतको अनौठो प्रविधिको साथ, सेल्टल्टले Google लाई तपाईंको उत्पादन पृष्ठलाई मुख्य कुञ्जीहरूसँग जोड दिन्छ जुन तपाइँले तपाइँको भण्डारलाई शीर्ष परिणामहरूमा चार्ज गर्न आवश्यक छ।. तपाईं छ महिना या वर्ष सदस्यता को क्रम मा पेशेवर खोजशब्द सुझावहरु, प्रभावी लिंक-निर्माण अभियान को रूप मा Google TOP10 मा 100 खोज सर्तहरु को रूप मा शामिल गर्न सक्छन्, रैंकिंग सुधार, अस्तित्व मा एसईओ त्रुटियों को जांच र सुधार. सबै भन्दा राम्रो छ कि तपाईंले अनुभवी Semalt विशेषज्ञहरूबाट निरन्तर पेशेवर समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
यसैले, यदि तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु लाई आउट गर्न चाहनुहुन्छ र संभावित ग्राहकहरु को इंटरनेट मा यातायात को सबै भन्दा ठूलो स्रोत देखि अंतहीन प्रवाह प्राप्त गर्न चाहते हो, Semalt अमेजन एसईओ तपाईंको सबै व्यवसाय को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नेछ.
अमेजन उत्पाद लिस्टिंग सहित कुनै पनि अनुकूलन अभियान को खोजशब्द ट्रैकिंग जरूरी भाग हो अनुकूलन. यो पहिलो अमेजन खोजशब्द ट्रयाकर हो, त्यसैले यो प्रतिस्पर्धी कीवर्ड ट्र्याकिङ उपकरणहरू भन्दा धेरै परिपक्व हुन्छ. यो उपकरणले रेटिङ बढ्न मद्दत गर्दछ र लामो समयको लागि तिनीहरूलाई उच्च राख्दछ. एएमजे ट्र्याकर आक्रामक रणनीति अनुसार, तपाईं चाँडै पहिलो पृष्ठ रैंकिंग गर्त पदोन्नति, रूपान्तरण दर अनुकूलन, र प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।. यसले तपाईंलाई आफ्नो उत्पादन रेटिङ स्थितिको बारेमा डेटा प्रदान गर्दछ र तपाईंको प्रतियोगीका उत्पादनहरूलाई ट्र्याक गर्दछ ताकि तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुँदा उनीहरूले देख्न सक्दछन्।. यसबाहेक, एएमजे ट्र्याकरले सबैभन्दा ठूलो अमेजन डील प्लेटफर्म भिपोनसँग सहयोग गर्दछ. com जसले व्यापारिकहरूलाई लाखौं संभावित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दछ. एक अधिक लाभ यो हो कि AMZ ट्रयाकर तपाईंको उत्पादन सूची को अनुकूलन गर्न सक्षम बनािन्छ. AMZ Tracker मा पृष्ठ विश्लेषकले तपाईंको हालको उत्पादन सूचीको बलियो र कमजोर बिन्दुहरू देखाउँदछ, तपाईलाई सही गर्न मौका प्रदान गर्दछ. यसबाहेक, अमेजनले नकारात्मक समीक्षाहरू ट्रयाक गर्न र इमेल प्रतिवेदन अनुकूलन गर्ने मौका दिन्छ.
यो उपकरणले तपाईंलाई सम्भावित खोज शब्दहरू तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरू प्रयोग गर्ने काम गर्दछ। तपाईंको उत्पादन वा सम्बन्धित वस्तुहरू समान आला भित्र फेला पार्न. यसको डाटाबेसमा 170 मिलियन भन्दा बढी खोजशब्दहरू छन्. यस उपकरणले व्यापारीहरूलाई लागि सूट गर्दछ जसले अमेजनमा आफ्नो उत्पादनको बिक्री बढाउन चाहन्छ. व्यापारिक शब्द सफ्टवेयरले अत्यधिक स्पेशल किबोर्ड शब्दहरू उजागर गर्न मद्दत गर्दछ जुन विक्रेताले एक विशेष उत्पादन खोज्न प्रयोग गर्दछ. यी वाक्यांशहरू द्वारा श्रेणीको लागि यो धेरै सजिलो छ किनकी तिनीहरू अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक छैनन्. यसबाहेक, यस उपकरणको प्रयोग गरेर, तपाईंले विश्वव्यापी बजारबाट कुञ्जीशब्दहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. व्यापारिक शब्द सफ्टवेयरले तपाईंलाई विभिन्न युरोपेली र एशियाली देशका विक्रेताबाट खोज सर्तहरूको डाटाबेसको साथ ग्लोबल दर्शकहरूको पहुँच प्रदान गर्दछ. व्यापारी शब्द उपकरणको साथ तपाई कुन डेटासँग कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुहुन्छ यस डाटालाई एकीकृत गर्न अन्तिम CSV डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. र अन्तमा, यस उपकरणको प्रयोग तपाईं पेशेवर ग्राहक सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ.
कीवर्ड टूल एक पेशेवर अमेजन खोजशब्द अनुसन्धान सफ्टवेयर हो जो अनलाइन व्यापारीहरु Amazon खोज प्रयोग गरी प्रासंगिक लामो-पूर खोज सर्तहरू उत्पन्न गर्नुहोस् प्रकार्यलाई सुझाव दिनुहोस्. यो उपकरण अमेजन सूचीबद्ध सुविधाहरूको लागि सैकड़ों हजार लागू लामो-पूर खोज सर्तहरू उत्पन्न गर्न अमेजन स्तरिय विशेषताहरू लागू गर्दछ. अमेजन बिक्रेताहरू जसले थप उन्नत सुविधाहरूको पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ अमेजन विकल्पको लागि खोजशब्द उपकरण प्रो बाट लाभ उठाउन सक्नेछ. यद्यपि, उच्चतम श्रेणीप्रबन्धन ट्रयाकिङ जस्ता तत्त्वहरू अमेजन किवर्ड उपकरणको प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँचबाट टाढा रहन्छन् Source .